Paul Pogba Oo Shaaca Ka Qaaday Sababta Kaliya Ee Cadeyn Karta Inuu U Qalmo Xiddiga Ugu Wanaagsan Dunida - Wargane News
Home Sports Paul Pogba Oo Shaaca Ka Qaaday Sababta Kaliya Ee Cadeyn Karta Inuu...
Saxiixa cusub ee Manchester United Paul Pogba ayaa shaaca ka qaaday in wadada kaliya oo uu ku cadeyn karo inuu u qalmo inuu yahay xiddiga ugu fiican dunida ay tahay inuu Manchester United ka caawiyo ku guuleysiga horyaalka Premier League-ga.
Xidigaan reer France ayaa dib ugu soo laabtay Old Trafford intii lagu guda jiray maalmahii suuqa kala iibsiga xagaagan, Red Devils ayaana kusoo ceshatay lacagtii ugu badneyd ee ciyaariyahan lagu soo iibsado dunida kubadda cagta iyadoo afar sano ka hor si fudud ugu ogolaatay inuu uga tago si bilaash ah.
Paul Pogba ayaa mar kale qiray inuusan wax shaki ah ka qabin dib ugu soo laabashadiisa Old Trafford, isagoo doonaya inuu kooxda saameyn deg-deg ah ku yeesho.
“Waan soo laabtay sababtoo ah waxaan doonayay inaan United tusiyo iney doonayaan soo laabashadeyda” ayuu yiri Paul oo la hadlayay Manchester Evening News. “Waxaan heysanaa koox fiican, kuwaas oo doonaya iney ku guuleystaan horyaalka mar kale, heysta macalin weyn, ciyaartoy waaweyn iyo koox cusub”
“Hamigeyga mar walba waa inaan noqdo qofka koowaad, ahaado mar walba kan ugu wanaagsan. Si aan u noqdo mid wanaagsan waa inaan ku guuleysto horyaalka – waana ujeedada qof walba. waana waxa aan dooneyno inaan sameyno” Ayuu yiri Pogba mar kale.
Si kastaba Paul ayaa kaliya u saftay Manchester United labadii kulan ee ugu dambeysay kulamada horyaalka markaas oo ay Man United guul ka gaartay Hull City iyo Southampton.